गोरु काट्दै गरेका चार पक्राउ - तितोपाटी
गोरु काट्दै गरेका चार पक्राउ
बाँके प्रहरीले गोरु काट्दै गरेका चारजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
नेपालगञ्ज–१६, जयसपुरमा घरभित्र गोरु काट्दै गरेको अवस्थामा चारजना पक्राउ परेका हुन् । सीमा प्रहरी कार्यालय, जयसपुरका इन्चार्ज अभय रावतको नेतृत्वमा गएको टोलीले राति साढे एक बजे मो. इलियास जोलाहाको घरमा गोरु काट्दै गरेको फेला पारेको थियो ।
प्रहरीले ‘सेन्ट्री’ बसेकी जोलाहाकी श्रीमती गुड्डी, मासु काट्दै गरेका छोरा सद्दाम र भतिजा अकबर अलि र इलियासलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । घटनास्थलबाट ठूलो मात्रामा मासु बरामद भएको छ । गोरुको छाला फालिसकिएको थियो । एक परिवारले एउटा सिंगै गोरु काटेर खान सक्छ ? या व्यापारका लागि काटिएको हो ? प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
बाँके प्रहरीका सहप्रवक्ता रणबहादुर विष्टले गोरुको मासुसहित पक्राउ परेका चार जनालाई गौवध अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताए
July 4, 2018 6:09 pm | विचित्र संसार